राष्ट्र बैंकद्वारा कोभिड प्रभावित व्यवसायको वर्गिकरण, कुन ऋणीले कहिले तिरे हुने ? – Clickmandu
राष्ट्र बैंकद्वारा कोभिड प्रभावित व्यवसायको वर्गिकरण, कुन ऋणीले कहिले तिरे हुने ?
क्लिकमान्डु २०७७ साउन १२ गते १७:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई वर्णिकरण गरेको छ ।
(ई) उपबुँदा (अ), (आ) र (इ) मा उल्लेख नभएका क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहको विस्तृत विश्लेषण गरी उद्योग, व्यवसायलाई कोभिड–१९ को कारण परेको असर, पुनः सञ्चालनमा आई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन लाग्ने समय तथा सोको लागि चाल्नु पर्ने कदम समेतको अध्ययन गरी स्पष्ट आधार सहित तीनमध्ये कुनै एक वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् ।
अजोड इन्स्यारेन्सको नाफा ५० % बढ्यो, प्रति सेयर आम्दानी कति ?
उपत्यकाभित्रने सबै नाका तत्कालै शिल गरौंः मेयर विद्यासुन्दर शाक्य
बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्यो, ३ सातामा नै ४ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह